CILMI-BAARIS: Xiriirka ka dhaxeeya bur burka qoysaska iyo kacsi la’aanta - iftineducation.com
iftineducation.com – Himid la’aanta waxaa loo aaneeyaa burbur qoysas badan taasoo ay sababtay raga oo ay ku adag tahay inay aqbalaan inay ku fashilmeen qancinta marwooyinkooda dhinaca sariirta. Meeshii laga waajihi lahaa dhibka waxaa jira rag isku qariya boor iyo qiiq meeshana keena dood aan meeshaba ku jirin. Xeeladaha ay isticmaalaan waxaa ka mid ah iyagoo sariirta yimaada marka marwado seexato. Arintu waxay circa isku shareertaa marka xaqiiqda la wajaho ama runta loo sheego. Dhibkaan waxaa kaloo la ogaaday inuu sababi karo niyad jab & murugo iyo kalsoonida qofka oo hoos u dhacda
Himad la’aantu waa cudur ka mid ah cudurada hase yeeshee raga qaarkiis waa ku dhib inay qirtaan si kastaba dhibku ha u darnaadeene. Ninka oo wax laga sheego awoodiisa galmada waxay dadka qaarkii si toos ah ugu fasirtaan in wax laga sheegay raganimada. Intaas waxaa dheer ka hadalka galmada oo dhaqanka Soomaalida ku ah ceeb lagama hadlaan ah, taasina waxay sii murjisaa arinka maadaama ay tahay qarso ha ku qarsatee.
Inkastoo dhibkan saameeyo qawmiyado kala hadana waxaa Soomaalida u dheer qaadka oo isaguna caanku ah galmo aan raaxo lahayn. Cilmi-baaris lagu sameeyay Soomaalida Sweden ayaa qaar ka mid ah haweenkii la waraystay soo bandhigeen cabashadooda. Waxay ku calaacaleen inay arintu meel xun gaartay oo dalbadeen furiin haddii aysan nimankoodu joojin cunida qaadka. Waxyaalaha ay ku eedeeyeen qaadka waxaa ka mid ahaa biyo-baxa shahwada oo soo degdegta ama waqtigeeda ka soo hormarta (premature ejaculation).
Wadanka Hollanda oo ay dhibkaas qabaan in ku dhow hal malyan waxaa la sameeyay bas loogu magac daray “erection bus” kaasoo ku wareega magaalooyinka si ay u geesinimo galiyaan raga diidan inay qirtaaan hawl-gabnimada galmada. Waxaa la yaab noqotay markay safka hore ee baska buuxiyeen rag da’doodu aysan sidaa u sii waynayn. Waxaa kaloo lagu arkayay rag ay soo khasbeen lamaanahooda oo ay safka kula jiraan. Baskaasi Holland kuma ekaane wuxuu isku soo maray wadamo kale oo dhibkan ka yahay lagama hadlaan “taboo” sida Portugal.
Cilmibaaris lagu sameeyay sababaha furiinka ayaa waaxaa lagu ogaaday tobanka sababood ee ugu badan sababaha burburka qoyska waxaana hogaanka markiiba u qabtay dhibaatooyinka la xiriira galmada iyo gogol dhaafka ay arintaasi sababto. Hadaba si aan amuurahaas wax uga ogaano ayaanu sababaha keeni kara waydiinay Dr Mohamed Abdullahi oo ah dhakhtar ka shaqeeya Waqooyiga London aqoon durugsana u leh kacsi la’aanta, dhibka gudniinka & xakamaynta dhalmada, wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay sidatan:
Mararka qaarkood waxay u dhacdaa si ku meelgaar ah waxaana loo aaneeyaa daalka, murugada, walwalka & walbahaarka. Hase yeeshee waxaa dhici karta inuu noqdo cilad joogto ah ama soo noqnoqota. Waxaa sababi karo dhawr arimood waxaase ugu badan marka xididada dhiiga u qaada xubinta galmada raga ay wax qaadkoodu hoos u dhacdo ama ay ciriiri noqdaan. Waxay u badan tahay raga qaab nololeedkoodu ay liidato sida kuwa cunada xun, khamriga badsada ama sigaarka caba.Waxaa kaloo keeni kara daawooyin loo qaato in lagu daweeyo cudurada qaarkood. Haddii dhibkaan aad isku aragtid waxaad u baahan tahay inaad u tagtid dhakhtar si laguu baaro ama lagaaga daaweeyo waxa keenay. Ogow dhibkan wuxuu noqon karaa calaamad cudur sida sonkorowga, dufanka dhiiga (Cholesterol) oo badata ama dhiig-karka.
Daawooyinka casriga ah ee lagu daaweeyo waxaa ka mid ah Viagra, Cialis iyo Levitra, waxaana loo sameeyay iyagoo kala awood duwan.